Masuuliyiin iyo Aqoonyahano Dhaliilay Xuska Ciyaarta Yoga ee lagu Qabtay Garoowe • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Masuuliyiin iyo Aqoonyahano Dhaliilay Xuska Ciyaarta Yoga ee lagu Qabtay Garoowe
Masuuliyiin iyo Aqoonyahano Dhaliilay Xuska Ciyaarta Yoga ee lagu Qabtay Garoowe
June 30, 2019 - By: HORSEED STAFF
Caasimadda Garoowe waxaa saaka lagu qabtay xuska maalinta caalamiga ee ciyaarta Yoga, waxaana ka qaybgalay safiirka Hindiya u fadhiya Soomaaliya iyo boqolaal haween Soomaaliyeed
Ciyaar-jimicsiyeedkan oo caan ka ah wadamada Aasiya ayaa waxaa soo qabanqaabiyay wasaaradda Haweenka Puntlnd oo gacan ka helaysa safaarada Hindiya ee Soomaaliya.
Masuuliyiin xilala ka haya Puntland iyo siyaasiyiin ayaa siyaabo kale duwan uga hadlay ciyaar-jimicsiyeedka Yoga ee Garoowe lagu qabtay. Masuuliyiintaasi waxaa ka mid ah duqa caasimadda Garoowe Axmed barre oo si adag uga horyimid ciyaarta Yoga.
“Soomaalidu waxay leedahay dhaqan, ciyaaro iyo caadooyin suuban oo ciyaalka iyo cirooluhuba ku madadaalan karaan. Balse dhaqamadan cibaadooyinka duqoobey ee soogalootiga ah salka ku haya ma aha wax ku haboon in lasoo minguuriyo. Sidaa awgeed, shacab iyo dawladba waxaan ugu baaqayaa inaan diinteena iyo dhaqankeena wanaagsan ilaashanno” ayuu yiri Axmed Barre
Siyaasiyiinta iyo aqoonyahan reer Puntland ayaa qoraalo ay ku baahiyeen baraha bulshada ee facebooga waxay ku sheegeen in ciyaarta YOGA ay tahay dhaqan diimeed ama cibaado muddo 5000 sanno laga isticmaali jiray dalalka Aasiyada Koonfurteed, gaar ahaan Hindiya
“Dhaqan-ka YOGA-da wuxu asal ahaan kasoo jeedaa Diinta Hindus-ka iyo Budhism-ka. 100% Dolwaddu waa ku Simbiririxatay Arintaas. Bulshadeena Dhaqan kasta waa u Nugushahay oo la yaab maleh” aqoonyahan Maxamed Cali Xundhur
“Markaad jabto ee maskaxda ka abaarawdo, wixii dhaqan ah ee dadka aad isleedahay waa ka sareeyaan ay sameeyaan ayaad ilbaxnima moodaa.Qofka bahdilka dareemaya ee naftiisa yasayaa waxa uu raadiyaa qaraabo qansax ka dhaxaysa isaga iyo dadka ama dhaqamada uu is leeyahay waa kaa sareeyaan. Bal YOGA oo ah ciyaar diimeed 5.000 oo sano ka hor Hindiya laga samayn jiray inaan soo waaridno maxaa nooga gidhiis ah?” Aqoonyahan Saalim Siciid
Safiirka Hindiya oo ka hadlay xuska maalinta caalamig ee Yoga
Maalinta Caalamiga ee YOGA ayaa caalamka laga xusaa 21 June sanad kasta, hase yeeshee magaaladda Garoowe waxaa laga xusay 30 June oo maanta ku beegnayd